विश्वलार्इ चकित पार्ने आइफोन एक्सका ६ वटा विशेषता! | Suvadin !
Nov 28, 2017 12:37
काठमाडाैं, मंसिर १२ – महिनौंदेखिको पखाई तथा अड्कलबाजीका बीच एप्पलको बहुप्रतिक्षित आइफोन एक्स विश्व बजारमा आइपुगेको छ। एप्पलको आइफोन एक्समा केही यस्ता फिचरहरु छन्, जुन बिल्कुलै नयाँ र प्रयोगकर्ताहरुलाई नवीनमत अनुभव दिलाउने खालका छन्।
–आइफोन एक्सका सबैभन्दा उत्कृष्ट ६ फिचर्समध्ये अब होम बटनको साटो फेस आइडी नामक फेसियल रिकग्निसन प्रविधि प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताले फोन अनलक गर्न सक्नेछन्।
–एनिमोजिस् एप्पलको नयाँ एनिमोजी फिचर अन्तरगत आइफोन प्रयोगकर्ताले आफ्नो मुहार अनुसारको इमोजी तयार पार्न सक्नेछन्। यो साँच्चिकै रोचक हुनेछ।
–यो एप्पलको मेसेज एपमा प्रि इन्स्टल्ड हुनेछ। यो फिचर यति रोचक हुनेछ की यसले आइफोन प्रयोगकर्तालाई लतमै फसाइदिनेवाला छ। उत्कृष्ट सेल्फीस् आइफोन एक्समा १२ मेगापिक्सेलको डुअल मुख्य क्यामरा तथा ७ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा हुनेछ।
–सेल्फी क्यामरामा पोट्रेट मोड हुनेछ, जसबाट फोटोको ब्याकग्राउण्ड ब्लर गरेर स्टुडियोमै जस्तो उत्कृष्ट सेल्फी खिच्न सकिनेछ। दुनियाँका ७० करोड आइफोन प्रयोगकर्ताको आइफोनमा अहिलेसम्म बज्ने क्लासिक मारिम्बा रिङटोन अब दिक्कलाग्दो बनिसक्यो।
–त्यसैले आइफोन एक्समा नयाँ रिङटोन रहेको छ। यो रिङटोनको नाम हो रेफ्लेक्सन। भिडियोस् आइफोन एक्समा नयाँ ओएलइडी डिस्प्ले रहेको छ। आइफोनका अनुसार यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट ओएलइडी डिस्प्ले हो।
–जसका कारण आइफोनमा भिडियोहरु निकै उत्कृष्ट गुणस्तरमा देखिनेछन्, चम्किलो तथा सार्प इमेजका साथ। साथै साउण्ड क्वालिटी पनि अब्बल रहेको छ किनकी स्टेरियो स्पिकरहरु ग्लास स्क्रिनको भित्रपट्टि लुकाइएको छ।
–र, अग्मेन्टेड रियालिटी एपस् आइफोन एक्समा एआरकिट फिचर रहेको छ। जसका कारण आइफोन एक्स अग्मेन्टेड रियालिटीयुक्त उत्कृष्ट स्मार्टफोन बनेको छ। यो फिचरका कारण प्रयोगकर्ताहरु आफ्नो आइफोनमा विभिन्न भर्चुअल रियालिटी गेमहरुको अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।